Dhibta Ceel-afweyn ka dhacaysa lama wada laha.
Wednesday July 10, 2019 - 15:08:00 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Mushkilada Ceel-afweyn ma ahayn mid xukuumada Muuse la kow satay, waxa ay ahayd mid soo jiitantay. halkaas mar kale aan cadeeyo, ma ahayn mid Wasiir Maxamed Kaahin
Mushkilada Ceel-afweyn ma ahayn mid xukuumada Muuse la kow satay, waxa ay ahayd mid soo jiitantay. halkaas mar kale aan cadeeyo, ma ahayn mid Wasiir Maxamed Kaahin iyo xukuumada Muuse la bilaabantay. Waynu ognahay inta ay soo jiitamaysay, inta xal la isku dayey, doorka ay hay'adaha dawliga ah iyo bulshada Somaliland ka qaadatay xal u helida mushkilada Ceel-afweyn. Waynu oganahay ciidanka qaranka Somaliland hawsha iyo tacabka uu habeen iyo maalin ku jiro ee ah Kala illaalintooda, hadda maaha cadaw laga illaalinayo, waa iyaga, kuwaas is dhalay kala illaalintooda.
In masuul ka tirsan xisbi ama baarlamaan inta uu indhaha qabsado ummadda siiyo war aan sal iyo raad lahayn, waxa ay ka turjumaysaa, farshaxanimada iyo run sheega masuulkaas. Dhacdada Ceel-afweyn ee horteena ka dhacaysay ee aynu daawanayno ee goob jooga aynu ka nahay, haddii qof sida uu doonayo inoogu soo weriyo, miyaynu ka qaadanaynaa!
Labada beelood ee ay dhibtu dhex taalay ayaa isku dayey in ay xalilaan khilaafkooda iyo dhibta dhex taal, sidii dhaqanku ahaan jiray, waa u taag waayeen, hoggaan dhaqamaeedka labada beelood ee Habarjeclo iyo Habar-yoonis ayaa isku dayey, waa u taag waayeen mar labaad, xukuumada ayaa mar walba door weyn ka qaadatay oo xalka raadinaysay marar badana waa ku guul-daraystay oo dadka deggaanka ayaa nabada lugta hayey. Sidoo kale, culimada iyo waxgaradka Somaliland oo dhan ayaa isku dayey waa loo taag waayey. halkaa markay maraysay ayaa in hubka laga dhigo xukuumadu soo jeedisay, xeer deg deg ah ayay soo gudbisay, waa laga diiday, micnuhu na waxa uu ahaa dhibtu ha socoto, kuwa diidaya sidaas uun bay doonayeen saw maaha. Waan ogahay oo dhacdooyinka haddaad la socotay jawaabtaadu waa haa.
dhacdooyinka noocaas ah ayay nooga waramayaan oo Barkhad Batuun iyo Xildhibaan Nacnac wax kale inoogu fasilayaan.
Arrimahan waa daawanaynay, waxaanu xidhiidh joogta ah la lahayn kuwii xal ka waday ee madax-dhaqameedka ahaa, wax kale iyo hay'adaha deeq bixiyayaasha ah ayaanu la kulanay noogu warama, halkaas ayaan in badan oo ummada ah aanay goob joog ka ahayn marka aad la kulmaysaan, ciddina aanay idin beeninayn.
Annigu Waxaan odhan karaa denbigaas kuwii diiday xeerka deg dega ah ee sadex da bilood ah iyo xisbiga aan mar qudha is daaya laga hayn ee siyaasadaynaya dhiiggaas daadanaya ayaa fartu ku godan tahay.
Allow xaqqa ummadaada tus.
Axmed Cali Kildhi